Ebumnuche Ihe Mere I Kwesighi iji Bido Vidiyo Gị | Martech Zone
Ebumnuche Ihe Mere I Kwesighi iji Bido Vidiyo Gị
Onye ahịa nke na-arụ ọrụ dị ịtụnanya n'akụkụ mbipụta ma hụ nsonaazụ pụrụ iche jụrụ ihe chere m na ha na-akwado vidiyo ha n'ime. Ha chere na ha nwere ike ịchịkwa ogo nke vidiyo ma melite njikarịcha ọchụchọ ha.
Azịza ya bụ mba. Ọ bụghị n'ihi na ekwenyeghị m na ha ga-adị ukwuu na ya, ọ bụ n'ihi na ha na-elelị ihe ịma aka niile dị egwu nke vidiyo akwadoro nke edozicharala ebe ọzọ. Youtube, Vimeo, Wistia, Brightcove, na a dịgasị iche iche nke Njikwa Akụrụngwa ụlọ ọrụ arụworị ọrụ site n'ọtụtụ nsogbu nke vidiyo akwadoro:
Bandwit Spikes - karịa saịtị ọ bụla metụtara, bandwidth spikes bụ nnukwu okwu na vidiyo. Ọ bụrụ na otu n'ime vidiyo gị na-aga ịrịa… ọ bụghị nsogbu dị mfe ma ị nwere ike ịchọ oge 100 ma ọ bụ ọbụlagodi 1000 ugboro bandwidth iji soro na-achọ. Nwere ike iche n’ikpeazụ ị nweta vidiyo gị ebe ahụ onye ọkpụkpọ ọ bụla na-egwu ma na-agba ọsọ ka ha na-anwa (ma hapụ egwu ahụ)?
Nchọpụta ngwaọrụ - ígwé ojii video hosting nyiwe ga-achọpụta gị Njikọta na viewport na-ebuli ogo nke video maka ndị na-ekiri gị. Nke ahụ na-enye ọmarịcha ahụmịhe onye ọrụ maka ndị ọrụ ha na njikọ dị ọsọ ọsọ ma ọ bụ njikọ nwayọ nwayọ. Ọ bụghị naanị na ana achi achi na vidiyo a na-asọpụta ngwa ngwa o kwere mee, ọ na-ebelatakwa ojiji bandwit gị.
Player Atụmatụ - ikike ịgbakwunye ọkụ, ụdị, ịkpọ-ime, akara, intros, outros list ndepụta atụmatụ nke etinyere na ndị ekesara egwuregwu na-arịgo n'ihi na nyiwe vidiyo a kwadoro nwere ndị otu mmepe niile na-arụ ọrụ iji bulie elele nke nyiwe ndị ahụ kwa ụbọchị. Companlọ ọrụ na-ele anya na nnabata vidiyo dị ka ọrụ ebe ha na-elele ya na ndepụta ahụ ma gaa n'ihu… mana nke a bụ teknụzụ nke chọrọ mmepe na ndozi na-aga n'ihu ka ngwaọrụ gbanwere, nnweta mgbanwe mgbanwe bandwidth, na ewu ewu nke atụmatụ gbanwere. Ndị ụlọ ọrụ ga na-anọkarị mgbe ha na-achọ ịzụlite ụlọ a.
Nchịkọta Cross-Site - onye tinyela ihe ọkpụkpọ gị? Ebee ka a na-ele ya anya? Echiche ole ka o nweela? Ogologo oge ole ka a na-ele vidio gị? Vidio nchịkọta na-enye nghọta dị egwu banyere etu ndị ọrụ si eji vidiyo ndị ahụ, ma ha anaghị eme ihe dabere na ha. Dị ka ọdịnaya ọ bụla ọzọ, nchịkọta dị oke mkpa iji dozie usoro ọdịnaya gị ma bulie ya maka ndị na-ege gị ntị.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - Ọtụtụ e dere banyere njikarịcha vidiyo ugbua… ma isi ihe anyi choputara bu na igwe ihe ichoro achoghi anya, kwadoro, ma obu nye ndi ulo oru ndi nabatara vidiyo ha aka. Ọ bụ ezie na vidiyo a na-ewu ewu ga-erite uru na ikike ya n'ọkwá, vidiyo agbakwunyere na peeji nke nwere ederede na ihe oyiyi ga-akwado nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ ka mma, karịa ibe vidiyo na-aga. Ihe ikpe dị bụ Youtube. Anyị nwere peeji nke saịtị a nwere vidiyo Youtube agbakwunyere nke dị mma karịa peeji Youtube n'ihi na ejiri ọdịnaya kacha mma.
Olee otu Bochum vidiyo si aru oru
Lelee obere vidiyo si na Wistia banyere etu nnabata vidiyo si arụ ọrụ na post anyị.
Ihe nlere nlekota vidiyo nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ, gụnyere nchekwa nchekwa, njikọta na nyiwe njikwa oru ngo, na-ebipụta na nyiwe vidiyo ndị ọzọ, na-ewepụta vidiyo vidiyo maka ịdenye aha yana gụnyere na ngwa ndị ọzọ nke 3 (dị ka ngwa mkpanaaka), transcoding na-akpaghị aka, ozi email, nyocha. ọba akwụkwọ, nkpado vidio na nhazi, ịmepụta ihe ntanetị vidiyo, yana ikike ịpịpụta ọkwa mbipụta na netwọkụ mmekọrịta gị. Ihe ndị a niile bụ atụmatụ nwere ike ịmegharị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nọrọ n'ụlọ gị - nke ahụ bụ ọtụtụ ọrụ.
Ebe Youtube bu igwe nyocha nke abuo, obuna ma oburu na ejiri oru di nma ma dikwa nma, agam ano na ya ebuli vidiyo m na Youtube, Tinye video transcription iji kpoo ọdịnaya na ibe vidiyo gị ma hụ na achọta ya!
Na nkenke, anaghị m enye ndị mmadụ ndụmọdụ hazie vidiyo nke ha. Obi siri m ike na backlog nke oru na-eche ọtụtụ ụlọ ọrụ ihu ma a bịa na mmepe na teknụzụ bụ ogologo. Gbado anya na bailiwick gị. Iwepụta oge iji mepụta ihe ndị ọzọ na-arụ kwa ụbọchị enweghị isi. Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa adaala na teknụzụ enwegoro iji mee ka BYO (wuo nke gị), enwere usoro ntọala na-agagharị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Anyị na-enye ụlọ ọrụ ndụmọdụ ka ha wulite teknụzụ n'ime mgbe ọ nwere ezi uche - na-esonye na ndị na-eweta ndị ọzọ ebe ọ dịkwa mma.
Vidio na-agbasa na ewu ewu ugbu a… na-abanye na igwe ojii SaaS nke na-eweta ọrụ iji bulie ahụmịhe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ụzọ ziri ezi iji gaa… taa.
Tags: gbaaazụmahịa vidiyonnabata vidiyonnabata vidiyonchịkọta vidiyovideo akwụ ụgwọvideo atụmatụvideo hostingvideo ọkpụkpọ atụmatụvidiyoVimeoamamiheyoutube
Nkuchi ọdịnaya, Usoro na Nsonaazụ na 2014
Aug 17, 2014 na 8: 44 AM
Nnukwu ederede, enwere m mmasị otú ị si kọwaa ya!